နောက်ပြန်စက်ဘီးစီးနိုင်မလား? - စက်ဘီး
အဓိက > စက်ဘီး > ပြောင်းပြန်စတီယာရင်စက်ဘီး - မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း
ပြောင်းပြန်စတီယာရင်စက်ဘီး - မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း
ရှစ်လကြာပြီးနောက် Sandlin သည်စီးနင်းလိုက်ပါလာသည်နောက်ပြန်စက်ဘီး။ သူဟာအချိန်တိုအတွင်းမှာပဲလို့သူကပြောပါတယ်လုပ်နိုင်သူ၏ ဦး နှောက်သော့ဖွင့်နေတဲ့လမ်းကြောင်းခံစားရတယ်။ အစစ်အမှန်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်အချိန်ယူရသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်သူသည်ဇွဲရှိရှိကျွမ်းကျင်ခဲ့သည်စီးနင်းကနောက်ပြန်စက်ဘီး။
ဟေ့ငါ Destin ပါ။ နေ့တိုင်းစမတ်ကျအောင်ကြိုဆိုပါတယ်။ လူတွေက 'ဒါဟာစက်ဘီးစီးတာနဲ့တူတယ်' လို့ပြောတာကိုသင်ကြားဖူးတယ်၊ အဲဒါကတကယ်ကိုလွယ်ကူတယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသင်မေ့လို့မရဘူးလား။ ဒါပေမယ့်ငါတစ်ခုခုလုပ်မိပါပြီ
ငါစိတ်ပျက်အောင်တစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တယ် ဒါဟာအမ်စတာဒမ်လမ်းတွေပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့တာငါတကယ်တော့ကြောက်တယ်။ ကျွန်တော်စက်ဘီးကိုမင်းတတ်နိုင်သမျှစီးလို့မရဘူး။
ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးကိုခင်ဗျားကိုမပြခင်ခင်ဗျား MacGyver mulletI နဲ့ခြောက်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေရဲ့နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကိုပြောပြရမယ်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုင်ကယ်စီးတတ်ခဲ့တယ်။ ငါဘဝကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုသင်ယူခဲ့ပြီးငါတကယ်ဂုဏ်ယူခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေ Barney က ၂၅ နှစ်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်အားဖုန်းဆက်သောအခါတွင်အရာရာပြောင်းလဲသွားသည်။
ငါဘယ်နေရာမှာပဲလုပ်လုပ်ဂဟေဆော်သူတွေကပါရမီရှင်တွေပါ၊ သူတို့ကအင်ဂျင်နီယာတွေအကြောင်းကိုပြက်လုံးကြိုက်ကြတယ်။ သူကငါ့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ သူကအထူးစက်ဘီးတစ်စီးဆောက်လိုက်ပြီးသူကကျွန်တော့်ကိုစီးစေချင်တယ်၊ ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့လက်ကိုင်ဘီးတွေ၊
သင်ညာဘက်သို့လှည့်ပါကဘီးသည်ဘယ်ဘက်သို့သွားလိမ့်မည်။ အဲဒါကလွယ်တယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါနဲ့ငါဒီလောက်အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြဖို့စက်ဘီးကိုခုန်လိုက်တယ်။ - ဒီမှာသူ, အမျိုးသမီးများနှင့်လူကြီးလူကောင်းမစ္စတာဖြစ်ပါတယ်
Destin Sandlin ။ စက်ဘီးစီးရန်ကြိုးစားခြင်း - ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူး
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရယ်နေတာကိုး။ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်စိတ်ပျက်မိတယ်။ အဲဒီအခြိနျမှာငါတကယ့်နက်ရှိုင်းသောဗျာဒိတ်တော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့အတွေးတွေရပ်တန့်သွားခဲ့တယ်။
ဒီစက်ဘီးကကျွန်တော့်ကိုစက်ဘီးအကြောင်းတော်တော်နက်နဲတဲ့အမှန်တရားကိုပြခဲ့တယ်။ ထို့ကြောင့်သိခြင်းသည်နားလည်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကြည့်ရတာမင်းစဉ်းစားနေတဲ့အရာကိုသိတယ်
Destin သည်ညှိနှိုင်း။ မရသောအင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး ဖြစ်ရုံသာမကမဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်ထိုသို့လုံးဝမဟုတ်ပါ။ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော algorithm သည်သင့် ဦး နှောက်အတွက်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည်။
စဉ်းစားပါ။ ခြေထောက်များကိုအောက်သို့ကျစေသောအင်အား၊ ကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးကိုမြှောက်ထားခြင်း၊ ဘီးများ၌လည်ပတ်ခြင်း၊ ဘီးများ၌လည်ပတ်ခြင်းနှင့်တွန်းခြင်းများ၊ စွမ်းအားတစ်ခုချင်းစီသည်ဤ algorithm ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုပြောင်းလဲလိုက်လျှင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တစ်ခုလုံးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်မဟုတ်သော်လည်းနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်များ ငါဒီစက်ဘီးကိုမစီးနိုင်ဘူး၊ ခဏပြောပြမယ် သင်စဉ်းစားနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ငါကဒါကိုသိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ကွန်ဖရင့်မှာပြောဖို့မကြာခဏပြောတတ်တယ်၊ အမြဲတမ်းအတူတူပါပဲ လူတွေကသူတို့ဟာလှည့်ကွက်တစ်ခုလုပ်နေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။
အလုပ်မလုပ်ပါဘူး မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကစင်မြင့်ကို ၁၀ ပေလောက်စီးဖို့အတွက်ဒေါ်လာနှစ်ရာလောက်မကိုင်တွယ်နိုင်ဘူး။ လူတိုင်းကသူလုပ်နိုင်ထင်ခဲ့တယ်။
မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ မင်းဒါကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး ဒီလိုမျိုး၊
အားလုံးအဆင်သင့်ပါပဲ။ သတိရ, သင်သည်သင်၏ခြေထောက်ပေါ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်အနည်းဆုံးလှိမ့်ဖို့ရှိသည်။
ထိုအချွတ်။ သွား, နင်းပေါ်တွင်သင်၏ခြေကိုစောင့်ရှောက်လော့။ ရုံခြေနင်းပေါ်တွင်သင်၏ခြေကိုစောင့်ရှောက်လော့။
အိုကေတစ်အချိန်ပို။ သင်၌တင်းကျပ်သောအတွေးအခေါ်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်လိုချင်လျှင်ပင်တစ်ခါတစ်ရံသင် ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ ဒီတော့ဒီမှာငါလုပ်ခဲ့တယ်။
ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဒီကားလမ်းကဒီမှာထွက်နေပြီးနေ့စဉ် ၅ မိနစ်လောက်လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ အိမ်နီးချင်းတွေကကျွန်တော့်ကိုလှောင်ပြောင်တယ်။
ငါအပျက်အယွင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ သို့သော် ၈ လအကြာတွင်ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့ကျတော့စက်ဘီးစီးလို့မရဘူး၊ နောက်တစ်နေ့မှာကျွန်တော်စက်ဘီးစီးနိုင်ခဲ့တယ်။
ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ထဲမှာလမ်းပွင့်နေပြီဆိုတာနဲ့တူတယ်၊ ဒါဟာတကယ်ကိုထူးဆန်းတယ်။ ငါ့ ဦး နှောက်ထဲမှာဒီလမ်းကြောင်းရှိနေတယ်လိုပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါအာရုံမစိုက်ခဲ့ရင်ငါ့ ဦး နှောက်ဟာဒီအာရုံကြောလမ်းကြောင်းကိုအလွယ်တကူဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပြီးအဟောင်းကိုပြန်လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးရင်းနှီးနေပြီ။
ကျွန်တော့်အိတ်ကပ်ထဲရောက်နေတဲ့ဆဲလ်ဖုန်းလိုသေးငယ်တဲ့အာရုံထွေပြားမှုတွေကငါ့ ဦး နှောက်ကိုထိန်းချုပ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဟောင်းဆီကိုချက်ချင်းပြန်ပစ်လိုက်ပြီးဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးငါကမောင်းနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော့်သားကမျိုးရိုးဗီဇနဲ့အနီးဆုံး၊ သူဟာပုံမှန်စက်ဘီးစီးတာ ၃ နှစ်လောက်ရှိခဲ့တယ်၊ ဒါကသူ့ဘဝရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ပဲ။
ငါသူ့ကိုနောက်ပြန်ပြန်သွားဖို့ဘယ်လောက်ကြာလိမ့်မယ်သိချင်တယ်။ သူကနောက်ပြန်သွားရင်သူကသြစတြေးလျကိုသွားပြီးအာကာသယာဉ်မှူးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်မယ်လို့ပြောရင်မင်းအရှုံးပေးမှာလား။ - အမှတ် - ဆက်လုပ်ပါ။ ဒါကစတင်ပုံဖြစ်သည်။
ဒါကိုကြည့်ပါ ဒါကကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထ, သင်ကရတယ်။
မင်းသူ့ကိုမြင်လား ဦး နှောက်ကိုနားလည်ပြီလား ဒီတော့သူ .. မင်းဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့လဲ။ သီတင်းနှစ်ပတ်? နှစ်ပတ်အတွင်းသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုလုပ်ရန် ၈ လကြာအောင်လုပ်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ကလေးတစ်ယောက်တွင်အာရုံကြောပလပ်စတစ်ပိုတတ်ကြောင်းငါပင်ပြောနေသလား။ အရွယ်ရောက်သူအဖြစ်
ဤစမ်းသပ်မှုမှကလေးများသည်အရွယ်ရောက်သူများထက်ပလတ်စတစ် ဦး နှောက်များများရှိကြသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ငယ်ရွယ်စဉ်ကဘာသာစကားသင်ယူရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ အိုကေဒီစက်ဘီးစီးခြင်းပရိုတိုကော။ ငါအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာစီးနင်းနိုင်ပြီး၊ မြန်မြန်သွားနိုင်သည်။ ငါစမ်းသပ်မှုပြီးဆုံးပြီဟုထင်သည်။
အိုကေ၊ အခုဆိုရင်အမ်စတာဒမ်ကိုငါရောက်နေပြီ၊ မြို့ကလူတွေထက်စက်ဘီးစီးတာပိုများတယ်။ မေးခွန်းမှာကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်စက်ဘီးစီးနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ငါဆိုလိုတာကငါပြန်သွားတဲ့အခါစက်ဘီးစီးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါစက်ဘီးကိုဘယ်လိုစီးရမယ်ဆိုတာနားမလည်တဲ့အချိန်အားလုံးကိုကုန်လွန်ခဲ့လား။ ပုံမှန်ငါ့ ဦး နှောက်ကိုရှုပ်ထွေးပါလိမ့်မယ်။
ပြီးတော့တစ်ယောက်ယောက်ကစက်ဘီးတစ်စီးယူလာရင်ငါပုံမှန်စက်ဘီးစီးဖို့ကြိုးစားကြည့်မယ်။ နောက်ပြန်ပါ၊ နောက်ပြန်ပါ ဒါကကျွန်တော့်ဘဝရဲ့စိတ်ရှုပ်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်အသက်ခြောက်နှစ်ကတည်းကသာမန်စက်ဘီးစီးခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒီအချိန်မှာတော့ငါမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကသိမြင်မှုဘက်လိုက်မှုဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာငါသက်သေပြနိုင်ခဲ့တာကငါလုပ်နိုင်တာအားလုံးဟာဒီဘက်လိုက်မှုလို့အမည်ပြောင်းလိုက်တာပဲဆိုတာကျွန်တော်သေချာပါတယ်။
ဒီတော့မင်းမမြင်တာကဒီမှာငါ့ကိုကြည့်တဲ့လူအုပ်စုရှိတယ်။ စက်ဘီးစီးလို့မရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အမေရိကန်ကိုငါကြည့်တဲ့အခါသူတို့ကငါမိုက်မဲတယ်လို့ထင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ငါဟာအဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါလေ့လာသင်ယူပြီးပြီ။
အိုကေ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိနစ် ၂၀ လောက်လှည့်စားပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ ငါ့ ဦး နှောက်ကရုတ်တရက် algorithm ကိုပြန်နှိပ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့မရဘူး၊
ကျွန်ုပ်ရရှိပါသည်၊ ကျွန်ုပ်ရရှိပါသည်၊ ကျွန်ုပ်ကျွန်ုပ်ရရှိပါသည်၊ ကျွန်ုပ်ပြန်လာပါသည်။ အိုး၊ နှိပ်လိုက်ပါ
ငါရှိသည်, ငါကအိုကေရှိပါကရှိသည်။ ဒါဟာယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အိုကေ၊ ကျွန်တော်စက်ဘီးစီးနိုင်တယ်။
ငါရှင်းပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကမရကြဘူး။ ငါဟာမိနစ် ၂၀ လောက်အတုလုပ်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ငါ့ကိုဘယ်သူ့ကိုမှမယုံဘူးလို့သူတို့ထင်ခဲ့တယ်။ ငါကအတုခဲ့ပုံရသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
မင်းငါ့ကိုလိမ်နေတာလို့မင်းထင်တယ် သငျသညျအကြှနျုပျကိုမယုံ - ဒါဟာအရမ်းထူးဆန်းတဲ့သလိုပဲ - ငါလိမ်နေတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်လား
ငါလိမ်မှာမဟုတ်ဘူး ကမ္ဘာပေါ်မှာစက်ဘီးစီးဖို့ဘယ်တော့မှမေ့ခဲ့ဖူးတဲ့တစ်ယောက်တည်းလူတစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောတတ်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စက်ဘီးစီးရန်သင်မမေ့နိုင်ကြောင်းလူတိုင်းသိလို့ပါ။ ဒါနဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုကနေအချက်သုံးချက်ကိုလေ့လာခဲ့တယ်။
ဂဟေဆော်တာဟာအင်ဂျင်နီယာတွေထက်များတယ်၊ အသိပညာဆိုတာအမြဲတမ်းနားလည်မှုတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ အမှန်တရားဆိုတာအမှန်တရားဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်။ ငါမစဉ်းစားသောအရာကိုနေပါစေ။
ဒါကြောင့်သင်ဟာအရာရာကိုဘယ်လိုအနက်ဖွင့်မလဲဆိုတာကိုအထူးဂရုပြုပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကကမ္ဘာကြီးကိုဘက်လိုက်မှုနဲ့ရှုမြင်တယ်၊ Destin လားလို့သင်ထင်လား၊ OK၊ အကယ်၍ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း Smarter ကိုထောက်ပံ့လိုလျှင် audible.com/smarter တွင်အခမဲ့အော်ဒီယိုစာအုပ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
မင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ငါနောက်ထပ်စက်ဘီးစီးနည်းကိုသင်ယူခဲ့ရတယ်၊ ငါ့သားလည်းလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့် C Commander Hadfield ကအခြားအာကာသယာဉ်ကိုဘယ်လိုစီးရမလဲဆိုတာကိုသင်ယူခဲ့ရတယ်။ မသာ, ဒါပေမယ့်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားအာကာသစခန်း၏အမျိုးအစား။ သူသည် Mir နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်း၌ရှိသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစမတ်ကျကျပံ့ပိုးချင်တယ်ဆိုရင်၊ com / smarter, ကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိများအတွက်အာကာသယာဉ်မှူး၏လမ်းညွှန်။ ငါက Destin ပါ။ နေ့တိုင်းသင်စမတ်ကျနေပြီ။
ကျွန်တော့်အလိုလိုတုံ့ပြန်မှုကမှားတယ် (Destin) ဘာကြောင့်လဲ။ ကားမောင်းသင်ရုံတည်ဆောက်? - ငါမမောင်းနိုင်၊ တည်ဆောက်တယ်။
နောက်ပြန် ဦး နှောက်စက်ဘီးကဘာလဲ?
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုတစ် ဦး အပေါ်အခြေခံပြီးဆိုင်ကယ်သင်ကဘယ်ဘက်လက်ကိုင်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာညာဘက် veer ဖို့အထူးဒီဇိုင်းနှင့်သင်လက်ကိုင်ညာဘက်လှည့်တဲ့အခါမှာ left ။ သင်ဒီစီးလို့မရဘူးစက်ဘီးSandlin သည်သူ၏ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားထုံးစံအတိုင်း Cruiser အကြောင်းစိတ်ချစွာအာမခံသည်။5 2015 ။
နောက်ပြန်ခြေ pedaling တစ်ဆိုင်ကယ်ပျက်စီးစေပါသလား?
သင်ကပုံသေဂီယာကိုပြောနေတယ်ဆိုရင်၊နောက်ပြန် pedaling ဖြစ်ပါတယ်အခြေခံအားဖြင့်အတူတူပင်နင်သင့်မှလွဲ။ က forwardစက်ဘီးအလိုတော်အခြား ဦး တည်သွားလာ။ သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီအလိုတော်ထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲဖြစ်နှင့်အလိုတော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်သည်သင်၏ crashing နှင့်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်ဆိုင်ကယ်။
သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်စက်ဘီးစီး။ လုံးဝပြproblemsနာမရှိပါ။ အချို့စက်ဘီးစီးသူများ၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ငါလုပ်ခဲ့တယ်ဒါဆိုငါတစ်ခုခုပြောရင်တကယ်စိတ်ပူစရာကောင်းတယ်ဆိုတာငါပြောနိုင်တယ်။
ကြည့်ပါ၊ ဤသူကားငါ၏ဘုရား၊ ငါ့လိင်တံလုံးဝထုံသွားပြီ! အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းကိစ္စရပ်များကိုလေ့လာသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုပြန်သွားကြမည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိထိပ်တန်းဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒပညာရှင်တစ် ဦး - Anthony Koupparis အမည်ရှိသောအမျိုးသားတစ် ဦး နှင့်ပူးပေါင်းပြီးစက်ဘီးစီးသူအမျိုးသားများအားလုံးနားထောင်သင့်သည့်ခိုင်မာသောလက်တွေ့ကျသောအကြံဥာဏ်များပေးရန်လိုအပ်သည်။ သူကသူဟာသံမဏိသူဖြစ်ပြီးဒီလူတွေကကုန်းနှီးမှာအချိန်အများကြီးကုန်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့မစတင်ခင်မှာခန္တာကိုယ်ဗေဒသင်ခန်းစာပါ။
ဒါကငါ့စက်ဘီးစီးတာပဲ။ ယခုသူသည်စက်ဘီးစီးနေသည့်အရိုးစုဖြစ်ပြီး ပြီးပြီ လိင်တံနှင့်နီးသည်။
မင်းသိလိမ့်မယ်မင်းရဲ့လိင်တံနဲ့ ၀ တ္ထုတွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဝှက်ထားလေ့ရှိတာသေချာတယ်။ သင်၏တင်ပါးနှင့်သုက်ပိုးများအကြားပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးyourရိယာကိုသင်၏ perineum ဟုခေါ်သည်။ သင်စက်ဘီးစီးနေစဉ်ဤဒေသသည်သင်၏ကုန်းနှီးနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်။ အရေပြားအောက်တွင်ဆီးအိမ်သည်လိင်တံမှတစ်ဆင့်ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသော Urethra ဖြစ်သည်။
Perineum တွင်ကြီးမားသောသွေးကြောများနှင့် pudendal အာရုံကြောများပါရှိသည်။ ၎င်းသည်whichရိယာအားခံစားမှုပေးသောကြောင့်စိုက်ထူခြင်းကိုလည်းကူညီသည်။ Perineum ရဲ့အထက်မှာသင့်ရဲ့ဆီးကျိတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကသန္ဓေသားအရည်ကိုဖန်တီးပေးပြီး Urethra ကိုဖြတ်ကျော်တဲ့ဂလင်းတစ်လုံးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာဗေဒနှင့်ကုန်းနှီးပုံသဏ္Givenာန်ကြောင့်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်နာကျင်မှုသို့မဟုတ်ထုံထိုင်းခြင်း၊ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆီးကျိတ်ပြproblemsနာများအကြားဆက်စပ်မှုကိုလုပ်ရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသည်။ သို့သော်အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြစို့။
ဒါပေမယ့်စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး အဲန်တိုနီကဒီခေါင်းစဉ်ကိုဖြိုခွင်းဖို့အကြံပြုခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာလည်းရှိတယ်။
ငါတို့အချင်းချင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကောင်းကောင်းသိကျွမ်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ငါ Indianapolis ရှိလေတိုက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုတွင်ရှိစဉ်ကကျွန်ုပ်သည်လေလှိုင်းဥမင်၏စမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်နေစဉ်။ ထိုအချိန်တွင်စက်ဘီးပေါ်တွင်ညင်ညင်သာသာထိုင်ရန်သင့်မိနစ် ၃၀ အနေဖြင့်သင်၏စက်ဘီးသည်လေတိုက်ထောင့်များကိုအပြည့်အဝလှည့်ပတ်သွားစေသည်။ ဆိုလိုတာကမင်းရဲ့အထက်ခန္ဓာကိုယ်မှာလုံးဝရွေ့လျားနေရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးမျိုးသောတွန့်လိမ်မှုကရလဒ်ကိုပျက်ပြားစေလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်စက်ဘီးစီးဖို့တကယ်ကိုအတက်အကျဖြစ်နေတယ်။ မိနစ် ၃၀ အကြာမှာငါထွက်ပြေးခဲ့ပြီး၊ လိင်တံမှာအာရုံခံစားမှုလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သဘောပေါက်လိုက်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ကဒီအာရုံပြန်ရောက်လာတာကံကောင်းတာပဲ။ ဒါကြောင့်အဆုံးမှာတော့ရေရှည်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ရေတိုမှာဘာဖြစ်မလဲ။ အခြေခံအားဖြင့်သင် perineum အပေါ်တိုက်ရိုက်တင်သောဖိအားကြောင့်အာရုံကြောများကို နှိပ်၍ သွေးကြောအချို့ကို နှိပ်၍ သွေးကြောများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အာရုံကြောတစ်ခုပေါ်တွင်ထိုင်နေသောအချိန်ကာလကြာမြင့်စွာပျက်စီးခြင်းမဟုတ်သောအလွန်သေးငယ်သောပျက်စီးမှုအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်သင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်inရိယာ၌ထုံထိုင်းစေသည်။
ဒါကြောင့်သူကထူးဆန်းတဲ့အနေအထားမှာအိပ်ပျော်သွားပြီး၊ သင့်လက်တွေလုံးလုံးလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့နိုးလာတာနဲ့အမျှအတော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီခံစားချက်ကတော်တော်လေးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်ပေါ်လာပြီးရေရှည်ပျက်စီးမှုမရှိပါဘူး။ အရမ်းညာဘက်ကြောင်းအလွန်ဆင်တူသည်။ သို့ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း။ စက်ဘီးစီးပြီးတဲ့နောက်ငါတို့နားမကြားတဲ့ရောဂါခံစားနေရတယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဝင်ပေါက်ဆိပ်ကမ်းကဘာလဲ။ ဤအရာကိုသင်တွေ့ရှိပါကစက်ဘီးပေါ်သို့တက်ပြီးနောက်မှထုံနေလိမ့်မည်။
နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုမှာ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားသိခဲ့သည့်အတိုင်းစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောထပ်ခါတလဲလဲထုံထိုင်းခြင်းအကြားဆက်စပ်မှုရှိသလား။ - အဖြေမရှိပါ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အရေးကြီးမှုဖြစ်သည်။ စိုက်ထူခြင်းပြproblemsနာများသို့ ဦး တည်စေသောလုပ်ငန်းစဉ်များသည်နှလုံးရောဂါဖြစ်စေသောနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်စေသောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်၌ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ သို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်လျှင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်သော်လည်းနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်မှာလူလတ်ပိုင်းလူအများစုသည်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုစတင်ကြလိမ့်မည်။ သငျသညျယခုစက်ဘီးစီးနေပြီးအသက်အရွယ်ကြီးရင့်သော Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်လျှင်သင်၏ပထမဆုံးအတွေးက 'အိုး၊ ဒါကစက်ဘီးစီးတာကြောင့်ငါ့ရဲ့ကုန်းနှီးပဲ' ဆိုပြီးမစဉ်းစားသင့်ဘူး။ သဲထဲ၌ကျွန်ုပ်ခေါင်းကိုမသင်္ဂြိုဟ်ရန်ဖြစ်သင့်သည်။ ၎င်းသည်ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသေးသောအရာ၏အရိပ်အယောင်ဖြစ်နိုင်သည်။
ငါသည်ဤထွက် check လုပ်ထားရရန်လိုအပ်သည်။ သင့်ရဲ့ဆီးခုံမို့မို့အာရုံကြောကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အတွက် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက်အတော်လေးခက်ခဲလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသင်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီတော့အဲဒါကိုလုပ်ဖို့အတော်လေးခက်ခဲပါသလား။ သင့်ရဲ့ perineum ကိုထိခိုက်စေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ထုံဆေးကသင့်ကို erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပေးလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါ။
တကယ်တော့ဒါဟာသင့်ကို erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သွားကြည့်ပါ။ ပထမ ဦး စွာနှလုံးအမြင်အရသင့်တော်သော MOT တစ်ခုရရှိရန်အတွက် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကုသမှုကိုဘာကြောင့်မလုပ်သင့်တာလဲ။ ဆိုလိုတာကစက်ဝိုင်းကပြည့်နေပြီ။
၎င်းသည်အနည်းငယ်ပြတ်တောက်သွားသောအရာမှသင်ထွက်ပြေးလာနိုင်သောတကယ့်ကျန်းမာရေးပြproblemနာသို့သွားခဲ့သည်။ ပြီးတော့သင်ကသူတို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်ဆီးကြိတ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြproblemsနာများနှင့်အထူးသဖြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကော။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, စက်ဘီးစီးခြင်းဆီးကျိတ်ကင်ဆာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာဆီးကြိတ်ကင်ဆာဘယ်လိုဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါဟာသင်ဟာဆီးကျိတ်ကင်ဆာအတွက်မသင့်တော်တဲ့စစ်ဆေးမှုခံထားရမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပါဘဲ။ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုညွှန်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာသွေးစစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်စက်ဘီးတစ်စီးကိုစီးနင်းလိုက်ပါကသင်၏ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုအမျက်ဒေါသဖြစ်စေနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် PSA ဟုခေါ်သည့်သင်၏သွေးစစ်ဆေးမှုဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်။ သွေးစစ်ဆေးခြင်းသည်ဆီးကြိတ်ကိုတိကျစွာစစ်ဆေးသော antigen blood test ကိုသင်လုပ်ခဲ့သည့်အဆင့်သို့ရောက်သည်အထိသွေးစစ်ဆေးခြင်းသည်၎င်းသည် artificial elevated လုပ်ပြီးနောက်သင်၌စက်ဘီးစီးနေသောကြောင့်သင်တစ်ခါမျှမလိုအပ်သောစစ်ဆေးမှုတစ်ခုလုံးရှိသည်။ ဒါကြောင့်ထိခိုက်လိမ့်မည်။
ဒါဟာနည်းနည်းလေးပါ၊ ဒါပေမယ့်သင်ဟာများစွာသောဓာတ်ခွဲခန်းကိုအခြေခံတဲ့သုတေသနကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်များစွာသောမော်လီကျူးအမှတ်အသားများစွာဟာဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ခြင်းသည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရဲ့အညွှန်းကိန်းတွေနဲ့မကိုက်ညီပါဘူး၊ ဒါကြောင့်စက်ဘီးစီးတာကသင့်ကိုကျန်းမာစေတယ်၊ ကျန်းမာရေးအတွက်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချနိုင်ခြင်းနှင့်မသင့်လျော်သောဆီးကျိတ်ကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိစေသည်။ ပြီးတော့သူကပေါ်တတ်၏။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၏အဘယ်သူမျှမမြင့်မားတဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
ယောက်ျားတွေအနေနှင့်ငါတို့လုပ်သင့်သည်များကိုစဉ်းစားပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြီးလာတာနဲ့အမျှဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာနိုင်တယ်။ သင်ယခုသတိထားသင့်သောပထမ ဦး ဆုံးအချက်မှာရောဂါလက္ခဏာအချို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေသည့်အရာများမှာရေအလုပ်လက္ခဏာများ၊ နောက်ကျောနာကျင်ခြင်း၊ ရေတွင်သွေးထွက်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ အရာဝတ္ထုများ၊ ဤအရာများကိုသင်ထပ်မံတွေ့ကြုံခံစားပါကထို့နောက်သင်သည်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာ ၀ န်သို့မဟုတ်မိသားစုဆရာဝန်နှင့်တွေ့သင့်ပြီးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်သင့်သည်။
သင့်ကိုဆီးကျိတ်ကင်ဆာစစ်ဆေးရန်စစ်ဆေးလိမ့်မည်ဟုအလိုအလျောက်မဆိုလိုပါ၊ သို့သော်ထိုဆရာဝန်ကသင့်အားစာမေးပွဲ၏ကောင်းမွန်သောအရာများနှင့်စာမေးပွဲ၏အားနည်းချက်များကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်နှစ်ယောက်စလုံးသည်ရှေ့သို့ဆက်ရမည်၊ မသွားမည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ယောက်ျားတွေကအဲဒါကိုလုံးဝလျစ်လျူရှုမထားချင်ဘူး။
နှင့်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, ဒီနေ့အစောပိုင်းကအများကြီးဤအရာတို့ကိုရှာတွေ့သူတို့လုံးဝခွဲထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာဘယ်အသက်အရွယ်အကြောင်းပြောနေတာလဲ။ ဘယ်အသက်အရွယ်ကိုသင်ပူပန်သင့်သလဲ။ ထိုအခါငါသင်သိဝမ်းနည်းဖွယ်ဥပမာများဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိရှိကွောငျးကိုနားလည်သဘောပေါက်ပေမယ့် သင်မှန်သည်။
ဒါကြောင့်ငါ့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းထဲမှာငါအရမ်းပုံပျက်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့မှာဒီလိုလေ့ကျင့်မှုကြီးကြီးမားမားရှိတယ်၊ သင့်ရဲ့အသက် ၃၀ မှာ ၈၀ နဲ့ ၉၀ အတွင်းလူနာတွေရှိလိမ့်မယ်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်အသက် ၅၀ ကျော်သွားလျှင်သင်စဉ်းစားသင့်သည်။ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာလက္ခဏာများရှိပါကထိတ်လန့်ခြင်းမရှိဟုအကြံပေးသင့်သည်။ သဲထဲ၌မြုပ်မထားပါနှင့်။ သင်လုပ်ဆောင်ရန်အလို့ငှာအလံနီများရှိခြင်း၊ အကယ်၍ သင်လိုအပ်ပါကစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအကြားဆက်စပ်မှုမရှိသော်လည်းဆီးကြိတ်ကြီးသည်များသောအားဖြင့်အမျိုးသားများဖြစ်သောကြောင့်လူလတ်ပိုင်းအရွယ်များဖြစ်သည့်အတွက်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာသည်ကြီးမားသောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စဉ်းစားပါကောင်းပြီကျွန်ုပ်မသိပါ။ သို့သော်အန်တိုနီနှင့်ဤစကားပြောဆိုမှုမှကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးသောစွန့်စားမှုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားသင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်သေဆုံးမှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရပြီးအမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။ gs ပါးလွှာတာဟာငါတို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အကြီးမားဆုံးပြproblemနာဖြစ်နိုင်တယ်။
အခုငါလေထဲမှာဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲ၌ကျွန်ုပ်၏ထုံနေသောလိင်တံအကြောင်းသင့်ကိုပြောပြဖို့အချက်အလက်အနည်းငယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပေမယ့်ဒီမှတ်စုကိုစဉ်းစားမိတာကငါတို့ရှိသမျှသည်ဒီတနင်္ဂနွေမှာဖွင့်နေသောကလပ်ရှိသူငယ်ချင်းများနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုရန်ကြိုးစားသင့်သည်၊ အနည်းဆုံး chat ဒီဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာကိုစဖို့အတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်။ အခုလည်း ကျေးဇူးပြု၍ အန်သိုနီအားသူ၏အချိန်နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်မျှဝေခြင်းအတွေ့အကြုံအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူခေါင်းစဉ်တူအခြားဆောင်းပါးကိုတွေ့လိုလျှင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါ။ နားမကြားသူများ၏ပထမပြproblemနာကိုတိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နိုင်ရန်သင့်တော်သောကုန်းနှီးကို ၀ ယ်ရန်သင့်အားကူညီပေးမည့်ဤချန်နယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုသာရှိသည်။
၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ဟန်ရှိသော်လည်းသုတေသနအဖွဲ့ကပြောကြားသည်နောက်ပြန် pedalingစက်ဘီးစီးသူများအတွက်အကျိုးရှိနိုင်သည်။ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲဝင်သူများသည်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများသို့အပြေးလေ့ကျင့်ခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးရစေသကဲ့သို့ခြေထောက်ကြွက်သားများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်နည်းလမ်းကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။25 2015 ။
တ ဦး တည်းတူအသစ်တစ်ခုကျွမ်းကျင်မှုရရှိသည်အခါစက်ဘီးစီးခြင်း, cerebellum ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဦး နှောက်လိုအပ်တယ်သင်ယူပါအဆိုပါညှိနှိုင်းလှုပ်ရှားမှု။ ကျွနု်ပ်တို့၏ cerebellum မှအချက်ပြထုတ်လွှတ်မှုကိုဆဲလ်တစ်ခုတည်ဆောက်ထားပြီး၊ အသစ်စက်စက်သင်ယူလိုက်သောမော်တာကျွမ်းကျင်မှုအတွက်မှတ်ဉာဏ်အဖြစ်ထွင်းထုထားသည်။ ''၁၇ ။ 2009 ။
Theဦး နှောက်ဆိုင်ကယ်Motion Fitness သည်ပျော်စရာကောင်းပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုင်ကယ်သောနင်းဖို့အသုံးပြုသူလိုအပ်သည်ဆိုင်ကယ်PC ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်။ ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောအစုကိုကယ်တင်တတ်၏ဦး နှောက်သင့်ရဲ့စောင့်ရှောက်ရန်ဒီဇိုင်းဆွလေ့ကျင့်ခန်းဦး နှောက်ချွန်ထက်သော၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းသော၊
နောက်ပြန် pedalingလေ့ကျင့်ခန်းစက်ဘီးစီးခြင်းသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းကျိုးများစွာဖြစ်စေနိုင်သည်။နောက်ပြန် pedalingပိုမိုကောင်းမွန်သော quadriceps activation၊ ကယ်လိုရီပိုမိုသုံးစွဲခြင်းနှင့်သင်၏ဒူးကိုဖိအားနည်းခြင်းတို့ကဲ့သို့သောအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။ စက်ဘီးစီးတာကစက်ဘီးစီးတာကိုမထိခိုက်စေဘူး။
အဆိုပါ Freewheel ကသော့ခတ်ခြင်းနှင့်မောင်းနှင်ရန်ရှေ့ဆက်ခြေနင်းခွင့်ပြုပါတယ်ဆိုင်ကယ်ပြောင်းပြန်သောအခါ, ဒါပေမယ့်လွတ်လပ်စွာလည်။ BMX ပုံစံအချို့စက်ဘီး(နှင့်ကလေးတွေစက်ဘီး) ဘယ်မှာ coaster ဘရိတ်ရှိသည်သင်နောက်ပြန်နင်းလျှင်(ကောင်းစွာများသောအားဖြင့်သူတို့လုပ်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးနောက်ပြန်နင်းရုံရွေ့လျားမှုစတင်နေသည်) ကဘရိတ်ဆိုင်ကယ်။၂၂ ၂၀၁၁ ။
စက်ဘီးတော်တော်များများမှာ freewheel ယန္တရားရှိတယ်။ ရှေ့သို့ခြေကျင်သွားသောအခါသူတို့ကအတွင်းသွားများကို pawls ဟုခေါ်သောအရာများနှင့်ထိတွေ့ကြသည်။ မြင်းစီးသူရဲရပ်လိုက်တဲ့အခါနင်ကစက်ဘီးကမ်းခြေလိမ့်မည်။ ဒါဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ paw များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံသောဖြစ်ကြသည်တ ဦး တည်းဘက်မှာ ramped နှင့်လမ်းထဲက pawls တက်တွန်း။
နည်းဥပဒေ ၁ ။မင်းဖြစ်ရမည်သငျသညျဂီယာပြောင်းလဲတဲ့အခါ pedaling။ အကယ်မင်းမပါဘဲ shifters ကိုကလစ်နှိပ်ပါနင်,ဂီယာမသွားဘူးပြောင်းလဲမှုအထိသင် လုပ်သည်စတယ်နင်နှင့်မင်းလုပ်တဲ့အခါ,မင်းအလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသောဆူညံသံအချို့ကြားရလိမ့်မည်။မင်းဒါ့အပြင်မလိုချင်ကြဘူးပြောင်းသည်ကဂီယာရပ်နေ
နောက်တစ်ခုစဉ်းစားရမယ့်အရာကတော့လမ်းဆုံလမ်းခွရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၊ ပိုပြီးတိတိကျကျပြောရရင်သူဖန်တီးတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့ပမာဏ။ ဘီးတစ်ခု၏ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းသည်လမ်းဆုံလမ်းခွ၏စတီယာရင်ဝင်ရိုးနောက်သို့လိုက်သွားသောအခါ၎င်းသည်ဆိုင်ကယ်၏ ဦး တည်ရာနှင့်လိုက်ဖက်ညီလိမ့်မည် (စျေးဝယ်သည့်တွန်းလှည်းသို့မဟုတ်ရုံးခန်းကုလားထိုင်များဘီးများကဲ့သို့) ။
ဤအရာကိုရှောင်ရှားရန်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် YouTube ကိုဖျက်သိမ်းပြီးဆိုင်းအင်လုပ်ပါ။ သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းကိုပြန်လည်ရယူစဉ်အမှားအယွင်းရှိသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ နောက်မှထပ်ကြိုးစားပါ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအပေါ်မှီခိုနိုင်သည့်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှန်တရားဖြစ်သည်။ စက်ဘီးစီးရန်မည်သို့လေ့လာသင်ယူခွင့်ရရှိခဲ့သူအားလုံးကို၎င်းမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိသည်။
စက်ဘီး၏အကျယ်သည်စက်ဘီး၏စတီယာရင်တုန့်ပြန်မှုအပေါ်တူညီသောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဘားများကလက်များကိုဖြန့်ဖြူးသည် (အထူးသဖြင့်ပါးဆပ်များသို့မဟုတ်ပေါက်ပေါက်များရှိပါက) နှင့်၎င်းသည်စက်ဘီး၏စတီယာရင် arc အရွယ်အစားကိုတိုးစေသည်။ ကျဉ်းမြောင်းသောဘားများသည်သေးငယ်သော arc ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊